Atụmatụ na otú Zere Common Green ihuenyo Mejọọ
2 Gbaanụ Green ihuenyo Video
3 Mee Green ihuenyo Video
4 Software & égwu
5 Common Mejọọ
Green ihuenyo usoro na-adịkarị ji kee ezi uche gburugburu na ndabere Mpaghara na-enweghị ihe nkiri na ọnọdụ. Nke a pụtara na a director nwere ike Nkiri na omee megide a green ihuenyo na mgbe mbubata a ndabere video na-egwu n'azụ omee. Mgbe mere n'ụzọ ziri ezi, i nwere ike chroma isi dum Mpaghara enweghị ime ka onye ọ bụla mara na ị na-adịghị na ebe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-dị nnọọ malite na green ihuenyo filming na chọrọ ike ezi uche adịgboroja gburugburu, e nwere ụfọdụ emehie na ị pụrụ izere aka gị Mpaghara anya ọzọ ndị ọkachamara na ndị ọzọ na ezi uche.
Atụmatụ na iji Nyere Gị Aka Gbochie Mejọọ na Green ihuenyo Filming:
1. yi nri uwe
Ikekwe otu nke mfe emehie na ọtụtụ ndị na-eme ka-acha akwụkwọ ndụ na ihuenyo filming n'ezie yi green uwe. Ọ bụrụ na ị na-yi uwe ma ọ bụ uwe nke nwere buttons ma ọ bụ accents na-a yiri agba green dị ka gị họrọ ndabere green, oyiyi na ị na oru ngo na na green ihuenyo na post-edezi ga-enweta ẹmende site ndị a accents na gị uwe ma ọ bụ site na uwe onwe ya. Nke a bụ oké ma ọ bụrụ na ị chọrọ ebipụ akụkụ nke ihe omee si ahu, ma ọ bụghị ọkachamara ọ bụrụ na ị na-agbalị ime ihe omee-egosi na a ezi uche idaha.
2. wrinkles na ihuenyo
Wrinkles na gị na ihuenyo pụrụ n'ezie iduga arọ onyinyo na agbagọ mbiet mma. Ọ bụrụ na ị na-agachi n'ogige atụrụ gị green ihuenyo maka nchekwa na ọ bụ ezigbo mkpa na ị na-ígwè si na ewepụghị ọjọọ green ihuenyo iji gbochie onyinyo na distortions na gị ndabere oyiyi. Nke a bụ nzọụkwụ na ọtụtụ naarap ma ọ bụ mkpa inwe raara onwe ya nye studio, a elu-edu green ihuenyo na a njikere green ihuenyo enweghị wrinkles na folds na-eme ka onyinyo.
3. Cheta gị ọkụ
Ezi mgbe onyinyo nwere ike egosi na a green ihuenyo tubà site onyinyo nke eme ihe nkiri na ihe na-enịm ke n'ihu ya. Lighting bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa na-emetụta i kwesịrị ịtụle mgbe na-agbalị ike ezi uche green ihuenyo Ebeonodu. Jide n'aka iji multiple ọkụ iji nweta na ọbụna ọkụ atụmatụ gafee isiokwu gị na n'ofe ihuenyo iji belata Onyunyo. Jide n'aka na-ele isiokwu ị na-agbapụ si otu n'akuku igwefoto ga gbaa ha na na ịgbanwe ọkụ dị mkpa. Ị chọrọ a mma ọbụna mkpuchi nke ìhè nke ga-belata onyinyo ma ghara ime ka distortions mgbe oyiyi machie na green ihuenyo. Ị nwere ike mgbe ụfọdụ idozi ọkụ-enweghị nkwekọ postproduction dị n'otu ụzọ ahụ ị ga dezie ihe oyiyi na Photoshop. Usoro a bụ na-ewe oge mere na ọ bụ na-emekarị nnọọ mfe iji a ọkụ ngwá ọrụ na professionally akwado si ìhè mbenata onyinyo tupu ị malite agbapụ.
4. Lezienụ ukporo blur
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-agbapụ a elu edinam idaha n'ihu a green ihuenyo na a igwefoto na ọ bụ nanị nwere ala shutter gbapụrụ ọsọ, ị nwere ike na-agba n'ime ezigbo nsogbu. Mgbe na-eji kamera na-ala shutter ọsọ tụlee eme edinam gbaa na ngwa ngwa ngagharị ma ọ bụ na-achị na-agaghị eme ka ọ bụla na mberede mmegharị n'ihu green ihuenyo. Motion blur si onye na-akpụ akpụ ngwa ngwa na igwefoto n'ihu a green ihuenyo pụrụ n'ezie n'iyi idaha na ibibi nsiridi nke idaha. Alternately i nwere ike tụlee renting a elu shutter ọsọ igwefoto iji zere nke a ngagharị blur ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-agbapụ a otutu edinam Ebeonodu. N'ikpeazụ nke a bụ ihe na ị ga-mkpa iji nwalee maka onwe gị mere na i nwere ike inwe a obi na-adị n'ihi na otú ihe edinam gị igwefoto nwere ike ijikwa na a green ihuenyo enweghị ngagharị blur.
5. Nọgidenụ na-gbaa na eku
Mgbe ị na-adịghị a otutu green ihuenyo-arụ ọrụ na mgbe ụfọdụ, ọ pụrụ ịbụ ike nke àgwà na-eso na-achị na mpụga nke green ihuenyo ebe. Mgbe filming n'ihu a green ihuenyo ị ga-mkpa-eji edebe gị gbaa na ihuenyo na ebe na ndabere. Ọ bụ omume na-eme ka post mmepụta edits ma ọ bụrụ na ihe omee ma ọ bụ isiokwu doo green ihuenyo gburugburu ebe obibi na igwefoto ma nke a nwere ike ịgụnye ịchọpụtacha onye ọ bụla mmewere nke na-adịghị hụrụ na green ihuenyo iji superimpose oyiyi azụ n'ihu nke ndabere image ị Akpara na-agba ọsọ na-acha akwụkwọ ndụ na ihuenyo. Atụla egwu ime multiple-ewe ma tụlee iji a ibu green ihuenyo ọ bụrụ na ị na-ahụ na-achị na-mgbe niile na-eme ka ụzọ ha si nke ndabere na mpaghara.
6. ilekwasị gị gbaa dị n'azụ isiokwu
Maka ọkachamara àgwà green ihuenyo gbaa ị pụrụ n'ezie ịbụ a bit anya mara na ọtụtụ fim adịghị n'ezie nkiri nkiri ahụ ma ihe dị n'azụ eme ihe nkiri. Na-eme ihe nkiri ma ọ bụ isiokwu gị a bit dechapụ na filming ubé n'azụ gị eme ihe nkiri ga-edebe lekwasịrị anya na ndabere nakwa dị ka idaha na-eme n'ihu nke green ihuenyo. Aiming-elekwasị anya nke gị ogbugba dị n'azụ isiokwu gị ma ọ bụ omee pụrụ n'ezie iduga nnọọ mma gbaa mgbe eji a green ihuenyo.
7. Gbanyụọ igwefoto Nkọ
Ọ bụrụ na ị na-eji a igwefoto dijitalụ akpaka-elekwasị anya ma ọ bụ mpịcha tụlee mbịne a mma dị ka ọ ga-ike ike n'ọnụ n'etiti gị eme ihe nkiri na ndabere. Ọ bụrụ na ị ga-achọ eme ihe nkiri na-achị subtly depụtara, ọ ka mma aka imeziwanye nkà gị na-elekwasị anya igwefoto na-ewepụ dijitalụ inyeaka mgbe eji akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ meziri.
8. Lelee gị props n'ihu nke oge
Ọ bụla promps na ị chọrọ iji na a green ihuenyo ga-dulled ala ma ọ bụ họrọ n'ihu nke oge. Onwunwu akpọkwa nwere ike na-egosipụta green ihuenyo na agba na-ewepụ nsiridi gị idaha. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na eji ihe ọ bụla onwunwu akpọkwa jide n'aka na-dole ha ala n'ihu nke oge ma ọ bụ ị pụrụ imesị nwere dezie ụfọdụ nke na agba na post mmepụta. Tụlee gị props n'ihu nke oge nke mere na ị na-adịghị na-rapaara na oke edezi ọrụ n'ihi na gị oru ngo.
9. N'ihi na a ọzọ akpọ ọkụ na isiokwu
Ọ bụrụ na ị na-filming a anwụ na-acha idaha na green meziri-eche free iji a backlight na-amụnye omee profaịlụ na-enye ha a ọzọ eke na ndị doro ìhè. Ọtụtụ ndị na-echefu na-agụnye eke ọkụ si idaha na-eme ihe nkiri gosi na mma nsiridi. Ebe a ìhè pụtara nso green ihuenyo nke ga-amụnye omee si n'azụ ma ghara ikwe ka ha profaịlụ ichupu ukwuu nke a onyinyo. Nke a nwere ike na-omume, ma bụ oké mmetụta mgbe mere nke ọma.
10. Iji kwesịrị ekwesị ọkụ ọbụna n'ihi ọchịchịrị Mpaghara
N'ikpeazụ ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na filming a darker idaha na a green ihuenyo, dị ka a egwu idaha n'abalị ma ọ bụ a idaha simulating n'èzí ma ọ bụ a dimly udo ụlọ, ị ka nwere ike inwe iji see idaha ke agafeghị oke ọkụ, dezie ọkụ na post mmepụta. Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike n'ụzọ kwesịrị ekwesị-amụnye omee na gị green ihuenyo ọma, nke a pụrụ iduga a grainy ndabere oyiyi nke pụrụ ịbụ nnọọ ala àgwà maka mmepụta. Edezi idaha na agbawanye ọchịchịrị ya mgbe e mesịrị ga-abụ otu ụzọ kacha mma na i nwere ike weghara image-enweghị grainy gbaa na hụ na a mma nsiridi. Ị ga-mkpa na-na ụfọdụ omume edezi iji nweta mma n'abalị Mpaghara n'ihu na-eme ha anya n'ezie doro.
Olee otú akuku a Video na Avidemux
> Resource> Video> Common Green ihuenyo Mejọọ na Olee izere ha